Isitolo esidayisa yonke impahla 4ft umugqa ukukhiqizwa yokwakha yaseGrisi Umkhiqizi kanye Umthengisi | Ukuxubana
Umugqa ophelele ufaka izingxenye ezingezansi
1.The ngokugcwele othomathikhi log ahlabayo isaha -Cutting the big size izingodo zibe 4ft noma 8ft noma ezinye usayizi ezidingekayo. Asikho isidingo sabasebenzi sokulinganisa nokusika, lo mshini usebenza kahle kakhulu ngokuqhathanisa nokusika ngesandla.
2.Log Loader -lokhu kufana ne-debarker. Igogi lizohlala phezulu endaweni ngaphambi kokuphela kokumaka. Ngemuva kokuqeda okukodwa, khona-ke ilog elandelayo izodonsela phansi ukumaka.
Log debarker -I-roller eyodwa kanye nama-roller amabili we-debarke awuhlobo lwe-mace olwenza kube lula ukubamba izingodo nokukhulisa ukusebenza kahle kwe-debarking. Sinamamodeli amabili: 1. imodeli echotshozayo engakwazi ukuchoboza imfucumfucu ebunjiwe yokuhamba nokusetshenziswa okulula. 2. imodeli ejwayelekile ngaphandle kokuchoboza
3. Log loader - lokhu kuyafana nomshini wokuxebuka. Run okuzenzakalelayo ngomshini uyaxebuka. Akunasidingo sokuthi abantu basebenze. Gcina izindleko zabasebenzi.
Uhlelo oluzenzakalelayo lwe-Auto- lolu hlelo luyindlela ebalulekile yokusebenza okungenamuntu. Lolu hlelo luqinisekisa ukuthi i-log isenkabeni yomshini wokuxebula ukuze izinhlangothi ezimbili zezingodo zihlutshulwe kungabe kusaba khona monakalo nodoti.
Umshini wokuxebuka we-5.Veneer - Umshini wethu wokuxebula ongashintshi ushayela kabili nge-roller futhi lokhu kwenza ukujiya nosayizi kunembile. Isivinini esishintshashintshayo nesisindayo futhi sivaliwe sicwilisiwe inaliti isikwele kanye nesikwele somhlahlandlela wesitimela senza umshini uqine futhi uzinze futhi ungagugi.
I-Veneer stacker -I-stacker ingahambisana ngokuzenzakalela nejubane lomshini wokuxebuka, imikhiqizo engafanelekile ingahle ihlelwe ngokuzenzakalela ngokuya ngezidingo.Kunemisebenzi efana nokubala okuzenzakalelayo nokwethusa, ukudlulisa okuzenzakalelayo.
Olandelayo: Umugqa wokuhluza we-8ft & 9ft